Famous billionaire Dzhon Rokfeller akati kudzidza kushandisa vanhu kwakafanana nyore sezvo Somuenzaniso, kuti vatenge shuga pane yomunharaunda Supermarket. pano chete ndiyo mano mutengo waro zvikuru anodhura zvose zviri munyika.
Kana makatsunga udzidze kushandisa zvepfungwa kwevanhu, mashoko Rockefeller kunge rabva mupfungwa dzako hwose. Pashure pezvose, mumwe nomumwe wedu anoziva kuti munhu kukura zvinogoneka chete pedyo nevanhu paruzhinji. Human zvepfungwa - chinhu chakadai, iyo vakaradzikwa mumwe nomumwe kubva kare makore.
Kudzidza kudzora vamwe vanhu
Kuti ave nesimba pamusoro pemurume kunzwisisa zvepfungwa ake, kwete zvakakwana kuziva hunhu hwake chete uye nenzira haazvibati. Chinhu chokutanga kuita - ndiko kudzidza kushandisa nezivo wodzishandisa chairo ani kunobva hunhu murume wake hunhu.
Munyaya ino tichataura pamusoro sei kushandisa zvepfungwa hwevanhu uye kushandisa ruzivo urwu mune tsika.
Ongorora zvaidiwa psyche
To munhu aenda mhiri pfungwa yake, vanachiremba yose kushandisa utariri unyanzvi vanhu. Kazhinji, ndizvo hypnosis. Nzira iyi ine rakananga nezvainoita psyche. Kana munhu anopinda imwe constricted mupfungwa, zviri nyore zvokuti kufuridzira chinhu, uye iwe unogona kudzora pfungwa dzayo uye maitiro.
Chokwadi, zvinangwa zvoudyire kuburikidza hypnosis kuri apara mhosva. Chikonzero ichi kuti vanachiremba unyanzvi vanoshandisa hypnosis chete vanoshaya kwazvo. Somuenzaniso, kana munhu chinhu ainetseka chaizvo nenzira iyi, wepfungwa anogona "Mukaverenga" midzi dambudziko kubva pakadzika chavanoziva.
Management Psychology munhu achinyanya kwakavakirwa ruzivo zvepfungwa pacharo, uyewo pamusoro pachavo zvechadenga wacho. ruzivo urwu kuchabatsira mumwe munhu kuti achinje maitiro mamwe vabatsirwe pachavo. Kuti azive unhu murume uri kuda, tarisa ake ose chiito uye kuteerera zvose zvaanotaura. Kamwe iwe unoziva kuti zvakanaka kudzidzwa, kushandisa wakatangwa munyaya ino, vanhu utariri pezvakaitwa.
mumwe nzira: kunoda zvakawanda
Nzira iyi yokuti unofanira kubvunza munhu zvikuru kupfuura uchida chaizvo. Kana, somuenzaniso, kuti aite chimwe chinhu chinoshamisa pamusoro penyu. Zvechokwadi, hazvingaiti kuti kubvumirana. Pashure pfupi nguva uchakwanisa kuenda kwaari kuita chinhu iwe, chii iwe chaizvoizvo. Psychology dzokuteerera hwevanhu hazvisi kuti haugoni kukwanisa kuramba. The ndechokuti achizeza kuramba kechipiri, uye chikumbiro yechipiri sezvo zvichienzaniswa wokutanga zvichaita sezviri nyore zvikuru.
Method maviri: anoreva rumwe bato chete nezita
kanzuru iyi inopa nyika akakurumbira wepfungwa Deyl Karnegi. Maererano naye, kuti murume nezita, iwe kubvuma kukosha kwayo. Ndicho zita nokuda kwevanhu maonero chinonaka. Pashure pezvose, kana munhu aine izvozvo, saka ariko, kana kamwe yavapo.
Chokwadi, kana iwe kusimbisa kukosha anokonzera, achipindura kuti nzvimbo iyi uye kuwana ruremekedzo. Zvinokosha kutaura kuti kutonga rinofanira kushandiswa madunhurirwa, pemisara, mazita, uye magariro mabasa. Somuenzaniso, kana iwe kudana chete munhu kwenguva refu nguva shamwari yake yepamwoyo, achaita pakupedzisira kutanga zvakakwana kutenda kuti kune ushamwari pakati pako.
Nzira nhatu: kumeso
Sezvatakamboreva, basa wepfungwa dzevanhu - chinhu zvakaoma, kunyange kana zvichiita sokuti pakutanga peziso kuti interlocutor kukunda nokururamisira nyore. Izvi zvinoshandawo kune nzira. Dzimwe nguva zvinoita sokuti kuti chinzvimbo pachavo kuti munhu, zvakakodzera chokungoda kuudzisira iye compliments uye zvose mashoko akanaka. Pano chinonyanya kukosha - Usaita nayo. Pashure pezvose, kana vanhu kunzwisisa zvaunotaura kwaari compliments venhema, mupfungwa dzake ikoko dutu nehasha. Zvino pamusoro chero netsitsi uye nzvimbo haigoni kufamba uye nehurukuro. Chinhu chikuru - kunzwisisa kuti nzira iyi ingashandiswa haasi munhu wose uye musaita chero mamiriro ezvinhu.
mumwe murume nenzira iyi basa iri kuti uchida kubvuma zvose zvakavanzika pfungwa nemanzwiro interlocutor ake.
Method Four: chadzera
The musimboti wose kuti pane imwe nguva mune kutevedzera munhu kufarira. Pashure pezvose, mumwe nomumwe kurerekera kune ushamwari nevaya zvakawanda kana zvishoma akafanana naye. Most dzinonakidza ndechokuti pashure panosvikira "nyaya" akadaro ane imwe nguva nguva kukurukurirana pamusoro rakashata uye nevamwe vanhu, vakanga vasina kubatanidzwa pakukurukurirana kwenyu. Pano zvepfungwa management inobva chete mazano sokune kurapwa nezita.
Method Five: Shandisai interlocutor kuneta
Chokwadi, kana ukabvunza munhu pamusoro chinhu pane imwe nguva paanenge aneta uye anoda kuzorora, iye angangotadza kubvumirana chikumbiro chako. Muchiitiko chino, iwe zvechokwadi vanofanira kusimbisa kukosha kwayo. Nditende, zuva rakatevera, anokumhan'arira wako chokwadi kuzadzisa chii iwe akakumbira nokuti zuro. The ndechokuti kana tiine munhu kuramba chinhu, tinonzwa kusagadzikana.
Method Six: nyore chikumbiro
Kuti tinzwisise sei kushandisa zvepfungwa kwevanhu, pakutanga kwezvose, sezvatakagamuchira akati, unofanira kudzidza nezvazvo napo. Aungaita munhu uri kuda uye kukumbira chinhu nyore. Pashure pfupi, kumbira chete munhu pamusoro chinhu chakaoma zvikuru. Nzira iyi inosanganisira zvishoma nezvishoma habituation kuvanhu kuwedzera kunzwisisa.
Chikurukuru - regai kukumbira zvose kamwe. Pakati yenyu zvikumbiro vanofanira kupfuura nguva yakawanda, zvimwe iwe kungoti funga kuti aiita zvakaipa.
Method Seven: Teerera zvakawanda, taura zvishoma
Kunyange kana pane imwe nguva wotanga kutaura kunzwisisa kuti haana kubvumirana zvachose neshamwari yake, regai pakarepo wokubata kwaari nenharo dzavo uye pfungwa. Dzidza kuteerera kutanga. Apedza kutaura, muudze kuti unokoshesa nzvimbo yake, asi iwe pachiitiko ichi pane ake nezvaunofunga. Pashure paizvozvo, mumwe munhu achanzwisisa kuti ndezve kwamuri kuti zvinoreva chinhu, uye edza kuteerera imi, kunyange kana asingadi kunamatira dzenyu pfungwa.
Method masere: To kupfupikisa
Kuburikidza chidobi ichi, unogona kukurumidza uye zviri nyore kuvaka anowirirana pamwe anenge munhu. Nzira iyi zvinoreva kuti panguva kudanwa, iwe neapo kuti kududza kutongerwa interlocutor ake, chete nguva ino nemamwe mashoko. Yakadaro kusvika kuchabatsira munhu kunzwisisa pachake, uye iva nechokwadi chokuti uri shamwari yechokwadi uye shamwari tsitsi.
In mhedziso, tichiti zvakanakisisa sei kushandisa zvepfungwa kwevanhu, anozivikanwa simba kwake uye anokwezva unhu. Kuti vanogona kuronga shamwari kwaari uye nechokwadi kuti akazadzisa chikumbiro chavo. vanhu ava kunyanya vasingazivi kukundikana.
Zvino iwe une pfungwa sei kubata murume uye ake nezviito. Panyaya iyi, chakavanzika iri psyche wacho. Tinofanira kutaura kuti kudzidzisa unyanzvi hwavo sezvo uchichengeta unogona kushandisa paIndaneti mitambo "People Management". Uye sezvo munoziva, kuti chinzvimbo pachavo kuti munhu, haumanikidzwi kushandisa nzira yakaoma yakaita hypnosis. Uyezve, uchishandisa izvi dzokubvisa pakushandisa vanhu, unogona kubvisa zvachose kunzwa kusagadzikana uye "kushandisa", izvo hazvo chipo pashure hypnosis.
More pazvese, zivo yawana uchakwanisa kushandisa kuitira kuvaka ushamwari uye vakanaka ukama nevanhu vakakupoteredza!
Doukyu: asi hunhu nevakwegura, unhu tichitarisa kuti mushandirwi
Yambiro. Features nzeve. A mukuru chinoratidza hanya
Sentimentalism: Ndezvemuranda pfungwa zvinoreva mumabhuku
Stress: chikuva. Mamiriro mupfungwa: zvinokonzera, kurapwa, dziviriro
Mupfungwa unyanzvi kukurukura
Boris Nikolaevich Chicherin: basa, enyika maonero, photo, Biography
Kupedza aiwanzopiwa wokushanda nemaoko avo pachavo
Kurwadza kwacho vari huro: zvinobvira zvirwere chokuita chiratidzo ichi.
Chii yakasiyana dindingwe mbada: tsananguro uye kusiyana zvikara
Atherosclerosis. Garlic tincture kuchenesa midziyo
Chinokosha mutemo pamusoro kuchengetedzeka pamusika
The V8 Injini: unhu, mapikicha, diagram, mudziyo, vhoriyamu, uremu. Cars vane V8 injini
Mafuta brine: yokubikisa nzira. nyore Recipes
Pfungwa Libertarian Party. The chikuru zvebasa vatungamiri uye mari
Reg: Chii chiri uye chii ongororo yakaitwa nenzira iyi